eZee IT Myanmar - Complete Hospitality IT Solutions Provider,Hotel Management Software Myanmar, Reservation Software Myanmar,Booking Engine Myanmar,Restaurant POS Software Myanmar,Restaurant Menu Software Myanmar,Mobile App Builder Myanmar
eZee Absolute isacloud based SaaS enabled B2B Property Management application that enables small to mid-sized hotels and hotel groups to efficiently manage the sales and guest interaction processes. It combines traditional property management systems (PMS)...
eZee Reservation is an Online Booking Engine which integrates seamlessly with the property website, enabling clients to book reservations, packages, and offers directly from the website. It lets you setup your entire property details through single...
eZee iFeedback isaversatile online feedback system for hotels and restaurants which allows to build stronger relationships with guests and customers, giving you complete freedom on how and when to collect feedback from guests...
Hub Point မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်.
Hub Point Co.,Ltd မှ Website, Hosting, IT Services များကို One Stop IT Solutions အဖြစ် Customer များအား ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော Company ဖြစ်ပါသည်။ India ပညာရှင်များမှ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် Develop ပြုလုပ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာ၍ပြည့်စုံသောအရည် အသွေးနှင့် 24/7 ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော eZee Hospitality and Restaurant Management Software ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။Company ၏ရည်ရွယ် ချက်မှာ Hospitality and Restaurant Industry များအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်တိုင်း လွယ်ကူချော မွေ့စေရန်နှင့် ဝင်ငွေများကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် IT Solution များဖြင့်ကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါ သည်။လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ရှိ Hotel နှင့် Restaurant ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်မှယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ရွေးချယ်အသုံးပြုနေကြပါသည်။
© 2022 eZee Technosys. All rights reserved.